Super Starter Off Grid Solar System 3.3kW Kit - 12 PV panels - Kimroy Bailey Group
The Super Starter Off Grid anyanwụ sistemụ na-enye ihe karịrị 3.3kW nke ike site na - 12 Pịlị PV PV na nkwado ndabere na batrị nwere ihe ndị dị mkpa nke anyanwụ ịchọrọ ịmalite. Onweghi isi ọwụwa isi itisa, wụnye ma nweta ike site n’anyanwụ.
SKU: RE-CK04 Categories: Ngwa zuru ezu, Renewable Energy, Ngwaahịa Ike Mmeghari ohuru Tag: Gbanyụọ Sistemụ Grid
The Super Starter Off Grid Solar Sistemụ 3.3 kW nwere 12 Pịlịlọtọ bụ Off Off Grid Package na nkwado Batrị Dị njikere ị ga - ewepụcha ihe, wụnye ma wedata ụgwọ ike gị n'otu ntabi anya. Wepụ isi ọwụwa site na-eche ụdị akụkụ ịchọrọ inwe yana nke ị na-achọghị. The Super Starter Off Grid Solar System Kit bụ nkwekọrịta kachasị mma iji bulie dollar gị na ọbụghị Solar ibido mana nweta ike zuru oke iji tụkwasata akụrụngwa gị dị mkpa ike.
12 Anyanwụ nke anụ ahụ nke nwere ihe karịrị 3.3kW nke ike sitere na anyanwụ
1 Inverter nke na-enye ihe karịrị 4kW nke ike
1 Onye njikwa chajị gosiri Amps 80
8 Na-akpọ Deple Cycle Batrị na 6V na-echekwa ihe karịrị 225Ah nke ike
Igbe Njikọ 1 DC
Mbupu n'efu na Jamaica
Nhọrọ nke Mbupu N'ụwa
The Super Starter Off Grid Solar System kit bụ maka onye ọ bụla chọrọ ịgbakwunye ike anyanwụ n'ụlọ ha na-enweghị:
Na-eche ihe ịchọrọ na ihe ị chọghị
Naanị ịchọrọ nzi dị mfe nke na-enye ike dị egwu
Kedu ihe Solar Big Boy zuru oke Kit nwere ike n’ụlọ gị
Igwe nju oyi (s)
20 ikanam oriọna
Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ maka Super Starter Gbanyụọ Igwe Ọdụdọ Kit
Agụmakwụkwọ Ndụmọdụ maka Super Starter Gbanyụọ Igwe Ọdụdọ Kit
Maka ndị ga-achọ nduzi zuru oke maka ịwụnye sistemu foto fotota anyanwụ na-akwado gị ịzụrụ nke ahụ Nzọụkwụ Mbara Igwe Mbara Igwe. Nzọụkwụ site na usoro anwụ na-akụ gị otu esi ejikwa ntụkwasị obi wụnye sistemu nke mbara igwe zuru ezu. Nke kachasị, ,lọ akwụkwọ a bụ nke mbido ọbụbụenyi ma chọọkwa ọhụụ ọhụụ nke anwụ ma ọ bụ ọkachamara nrụnye.
1 nyochaa maka Super Starter Off Grid Solar Sistem 3.3kW Kit - 12 Pịlị Ejiri
Kwu mba ọzọ ụgwọ ọkụ na ee ka ihe nwute kwa ọnwa site na ike anyanwụ na ngwugwu Super Starter Off Grid Solar System. Ngwa a zuru oke bụ Off Grid Off na ezigbo ihe niile ịchọrọ iji bido Solar n’ụlọ gị. Usoro a nwere ike ịgbanye ọkụ friji gị, igwe onyonyo, laptọọpụ, bọlbụ ikanam ọkụ 30, igwe ịsa akwa na ihe ruru 30% karịa.